05/26/13 ~ Myanmar Forward
Posted by drmyochit Sunday, May 26, 2013, under သတင်းများ | No comments
တိုင်းရင်းသားဒေသ ကို အထောက်ပံ့ ပေးနေသည် ဂျပန် နိပွန်ဖောင်ဒေရှင်း အကူအညီများကို အစိုးရ အဖွဲ့မှ တားဆီးပိတ်ပင် လိုက်ပြီး ဖြစ်ကြောင်း ရှမ်းပြည် တိုးတက်ရေးပါတီ SSPP/SSA ၏ နိုင် ငံခြား ဆက်ဆံရေး တာဝန်ခံ ဗိုလ်မှုးကြီး ဖိန်ဖ က ယနေ့တွင် ပြောသည်။
“အခု တလောမှာ ကျနော်တို့ တိုင်းရင်းသား လက်နက် ကိုင် အဖွဲ့ ထိန်းချုပ် နယ်မြေအတွင်း ရှိ စစ်ပြေး ဒုက္ခသည် တွေ အတွက် အစိုးရမဟုတ်တဲ့ NGO အဖွဲ့တွေ လာရောက် အကူအညီ ပေးတာကို မြန်မာ ငြိမ်းချမ်းရေး စင်တာ MPC က ပိတ်လိုက်တယ်။” ဟု ဆိုပါသည်။
ပြီးခဲ့သည် မေလ ၁၁ ရက်နေ့က ရှမ်းပြည် တိုးတက်ရေးပါတီ SSPP/SSA ထိန်းချုပ် နယ်မြေအတွင်းရှိ နေရပ်စွန့် စစ်ပြေး ဒုက္ခသည် များအတွက် ဆန်အိတ် (၆၀၀၀) ခန့် ထောက်ပံ့ ကူညီပေးရန် အတွက် အစိုးရကိုယ်စားလှယ်၊ ဂျပန် နိုပွန်ဖောင်ဒေရှင်း ကိုယ်စားလှယ် နှင့် SSPP/SSA အဖွဲ့ ကိုယ်စားလှယ် တို့က ရှမ်းပြည်နယ် လာရှိုးမြို့ တွင်း၌ တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
အဆိုပါ နိပွန်ဖောင်ဒေရှင်း၏ ပေးသည့် အကူအညီများကို SSPP/SSA ထံ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ရန် နိပွန်ဖောင်ဒေရှင်း ကိုယ်စားလှယ်ဘက်က အဆိုပြုခဲ့သည်။ ယင်း အဆိုကို အစိုးရကိုယ်စားလှယ်များက ကန့်ကွက်ခဲ့သည်။
ရှမ်းမြောက်ပိုင်း တန့်ယန်းမြို့နယ် ရှိ တအာင်း စစ်ပြေး ဒုက္ခသည်များအတွက် ဤခရီးစဉ်နှင့် အတူ သယ်ဆောင်လာသည့် ဆန်အိတ်ပေါင်း (၁၀၀၀) ခန့်ကို နိုင်ငံတော်သမ္မတ သိန်းစိန်က ပေးသည်ဟု ဆိုကာ SSPP/SSA ကိုယ်စားလှယ်များအား အစိုးရကိုယ်စားလှယ် များက လွှဲပြောင်း ပေးအပ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ အခြေအနေကြောင့် ဆက်လက် လုပ်သွားရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် ဂျပန် နိပွန်ဖောင်ဒေရှင်း အဖွဲ့ တို့သည် ပြီးခဲ့သည့် မေလ ၁၈ ရက်နေ့က သွေးစည်း ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ ဖယ် ဒရယ် ကောင်စီ UNFC အဖွဲ့နှင့် လာရောက် ညှိနိုင်းခဲ့သည်။
“ကျနော်တို့တင်ပြ ထားသည့် Project Proposal လုပ်ဆောင်သွားရမည့် ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် ကုန်ကျ စရိတ် ငွေများကို မြန်မာငြိမ်းချမ်းရေး စင်တာထံ အရင်ချ ပေးရမယ်။ အဲဒီက တဆင့် သူတို့ ခွဲဝေပေး သွား မှာဖြစ်ကြောင်း ငြိမ်းချမ်းရေး စင်တာက ပြောကြောင်း နိပွန် အဖွဲ့က ရှင်းပြခဲ့သည်ဟု” ဗိုလ် မှုးကြီး ဖိန်ဖ က ပြောသည်။
ထို ငြိမ်းချမ်းရေး စင်တာမှ အဆိုပြုချက်များကို UNFC အဖွဲ့က ပယ်ချလိုက်သည်။ အကူအညီ လက်ခံရေးနှင့် ပတ်သက်၍ UNFC အဖွဲ့အနေဖြင့် ပြီးခဲ့သည့် မေလ ၉ ရက်နေ့က ပြုလုပ်ကျင်းပသည် (Project Proposal) ပြန်လည် ရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမှ ချမှတ် ထားပြီး ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ အစိုးရမှ တဆင့် ဖြတ်သန်းပြီးမှ ရရှိသည့် အကူအညီများကို UNFC အဖွဲ့ဝင်များက လက်ခံတော့ မည် မဟုတ် ဤသို့ ချမှတ်ထားသည်ဟု ဗိုလ်မှုးကြီး ဖိန်ဖ က ဆိုသည်။
ဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး မြန်မာငြိမ်းချမ်းရေး စင်တာထံ မေးပြန်ခဲ့သော်လည်း ဖြေကြားပေးမည့်သူ မရှိပါ။
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ နည်းပညာတက္ကသိုလ် ကျောင်းသူ သေဆုံးမှု CID ဖော်ထုတ်ပေးရန် မိသား စုမေတ္တာ ရပ်ခံ
Posted by drmyochit Sunday, May 26, 2013, under ပြည်တွင်းသတင်းများ | No comments
အသက် ၁၈ နှစ်အရွယ် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ နည်းပညာတက္ကသိုလ် ကျောင်းသူ သေဆုံးမှုကို ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် များ က သာမန် ရေနစ်သေဆုံးမှုဟု မှတ်တမ်း တင်သောကြောင့် အမှုမှန် ပေါ်ပေါက်စေရန် CID ကပါ ပူးပေါင်းေ ဖာ် ထုတ်ပေးရန် မေတ္တာရပ်ခံ ခဲ့ကြောင်း သေဆုံးသူ၏ မိသားစုဝင်များက ပြောကြားသည်။
အဆိုပါ မေတ္တာရပ်ခံချက်ကို မေလ ၂၄ ရက် မွန်းလွဲ ၁ နာရီက MJN တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် သတင်းစာ ရှင်းလင်း ပွဲတွင် အထက်ပါအတိုင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
သေဆုံးခဲ့သူ မနော်မေသူသူဇော် ကို ရည်းစားဖြစ်သူ ကိုရဲမင်းဦးက အိမ်ပြန်ချိန် တွင် ရန်ကုန်-မှော်ဘီ ဟိုင်း လတ် ခရီးသည် တင်ယာဉ်ပေါ်သို့ ကိုယ်တိုင်လိုက်ပို့ပေးပြီး ကားထွက်မှသာ ပြန်ခဲ့သည်ဟု ဖုန်းဆက် အကြောင်း ကြား ခဲ့သော်လည်း ၄င်း တင်ပေးလိုက်သည့်ယာဉ်၏ အရောင်ကို မသိရှိသည် ဟု ပြော ဆိုနေ ခြင်း မှာ သံသယဖြစ်ဖွယ် ရှိကြောင်း သေဆုံးသူနှင့် ဦးလေး တော်စပ်သည့် ဦးစောအေးမင်းက ရှင်းပြ ဆို သည်။
မနော်မေသူသူဇော် ကို ၄င်း၏ချစ်သူ ကိုရဲမင်းဦးနှင့် ဦးလေးဖြစ်သူက ခေါ်သွားသည်ကို မျက်မြင် သက်သေ များ ရှိခဲ့သော်လည်း ၄င်းတို့ဘက်မှ ဦးလေးအစား အစ်ကိုဖြစ်သူကို အမှုထဲသွင်းကာ ဦးလေးဖြစ်သူကို အမှု တွဲမှ သွေဖည်အောင် လုပ်ဆောင်နေသည့် အတွက်လည်း သံသယဖြစ်ကြောင်း ၄င်းက ထပ်မံပြောကြား သည်။
မနော်မေသူသူဇော်မှာ ကိုရဲမင်းဦး က မွေးနေ့တွင် ဖုန်းဆက်၍ အတင်းခေါ်ဆောင်သည့် အတွက် လိုက် သွား ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ ညီမဖြစ်သူဘက်မှ မကြာခဏ သဘောထားကွဲနေသော ကိုရဲမင်းဦးကို မွေးနေ့ တွင် အဆက်သွယ်ဖြတ်မည်ဟု ယခင်က မိမိကို ပြောဆိုခဲ့ဖူးကြောင်း အစ်မဖြစ်သူ မခမ်းမွန်ထွေးက ဆို သည်။
သမီးဖြစ်သူ၏ အလောင်းကို အင်းစိန် ရဲစခန်းမှ ဆယ်ယူရရှိခြင်းကို သွားရောက် စုံစမ်းရာ သေဆုံးစဉ် မှတ် တမ်း ဓာတ်ပုံများ အရ အတည်ပြုနိုင် ခဲ့သော်လည်း အလောင်းကို သင်္ဂြိုဟ်လိုက်ပြီဟု ပြောဆိုခဲ့သဖြင့် မိသား စု ဝင်များ ကိုယ်တိုင် အင်းစိန်ဆေးရုံ သို့ လိုက်လံစုံစမ်းရာမှ အလောင်းကို ပြန်လည် တွေ့ရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ ဆေးစာတွင် ရေနစ်သေဆုံးသည့် အနေအထားဖြင့် ထုတ်ပြန်ခဲ့သောကြောင့် အဆင့်ဆင့် တိုင်ကြား ခဲ့ရာ ယခုအခါ မြောက်ပိုင်းခရိုင်က ဆက်လက်စုံစမ်းလျက် ရှိသော်လည်း ထပ်မံ စစ်ဆေးချက် အ ရ ရေနစ်၍ သေဆုံးသည်ဟု အဖြေ ထွက်လာနိုင်ကြောင်း၊ သေဆုံးသူနှင့် နောက်ဆုံးကျန်ရှိခဲ့သူကို သံသယ ရှိ၍ အမှုဖွင့် ပေးရန် တိုင်ကြားသော်လည်း အဆိုပါ ရဲစခန်းမှ အမှုဖွင့်ပေးခြင်း မရှိကြောင်း သေဆုံးသူ၏ မိခင် က ဆိုသည်။
"၁၉ ရက်နေ့ သူ့ရည်းစားက ၇ နာရီ ၄၅ မိနစ်လောက်မှာ ကားပေါ်တင်ပေးပြီး ကားထွက်သွားတယ် ပြော တယ်။ လှိုင်သာယာ အောင်ဇေယျ တာဝန်ကျရဲက ၈ နာရီ ၁၅ လောက်မှာ သမီးလေးရဲ့ အင်းစိန်လိပ်စာ ပါ တဲ့ ကျောင်းသားကတ်ရယ်၊ မှတ်ပုံတင်ရယ် ဖိနပ်ရယ် အပါအဝင် ပစ္စည်း ၁၁ မျိုးကို ညတွင်းချင်း တွေ့ တယ်။ အင်းစိန် အုတ်သဲ ကျောက်ကွင်းနားမှာ ၂၀ ရက်နေ့ မနက် ၇ နာရီလောက်ထဲက သမီးအလောင်း ပေါ်နေပြီ။ ဒါကို ၂၁ ရက်နေ့ မရမ်းကုန်း စခန်းမှာ လူပျောက် အမှုဖွင့်တော့ နှစ်နာရီအတွင်း သတင်း ဓာတ် ပုံတွေ ဖြန့်ပေးမယ် ပြောတယ်။ ၂၃ ရက်နေ့မှ အင်းစိန်မှာ အလောင်းတစ်လောင်း ရှိတယ်ဆိုလို့ စုံစမ်းကြည့် မှ သမီးမှန်း သိရတယ်" ဟု ၄င်းက ထပ်မံပြောကြားသည်။
အထက်ပါဖြစ်စဉ်နှင့် ဆက်စပ်နေသည့် ဖိုခုံလောက်ဆိုင်နေသော မြို့နယ်သုံးခု၏ ရဲစခန်းများ ချိတ် ဆက်ေ ဆာင် ရွက်မှု ပေါ့လျော့သည့်အတွက် ယခုကဲ့သို့ အငြင်းပွားဖွယ်ရာများ ပေါ်ပေါက်လာရ ခြင်းဖြစ်ပြီး ကွပ်ကဲ ရုံး သို့ အကြောင်းကြားကာ ချက်ချင်းဖော်ထုတ်ပါက နယ်စပ်ဒေသရှိ တရားခံများကို ချက်ချင်းမိသည့် အတွေ့ အကြုံများစွာ ရှိဖူးကြောင်း အငြိမ်းစား အကြီးတန်း ရဲအရာရှိတစ်ဦးက ဆိုသည်။
မနော်မေသူသူဇော် ၏ ပစ္စည်းများကို ပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့သည့် အောင်ဇေယျတံတား သည် လေးပေခန့် အမြင့် ရှိ သည့် လက်ရန်း သံတိုင်များ ရှိသောကြောင့် ၄င်းခုန်ချသည် ဟု ယူဆမည်ဆိုက အမျိုးသမီးတစ်ဦး အနေနှင့် တက်ရန် ခက်ခဲကြောင်း၊ မူးယစ်စေသည့် အရာတစ်ခုကို တိုက်ကျွေးပြီး ရေထဲသို့ပစ်ချ လျှင် လည်း အဆုတ်တွင်းရေဝင်ပြီး သေစေနိုင်ကာ ယခုအမှုမှာ သံသယဖြစ်ဖွယ်များ ရှိပြီး လက်ရှိတွင် ရန်ကုန် တိုင်းရဲ တပ်ဖွဲ့က ကြီးကြပ်ကာ ကြိုးစားဖော်ထုတ်လျက် ရှိကြောင်း မှုခင်းတပ်ဖွဲ့မှ အငြိမ်းစား အကြီးတန်း ရဲအ ရာရှိ တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
Posted by drmyochit Sunday, May 26, 2013, under နည်းပညာ | No comments
ကာလီဖိုးနီးယားပြည်နယ်မှ အသက်၁၈နှစ်အရွယ်ရှိ အက်ရှာ ခါရီသည် ဆဲလ်ဖုန်းအားစက္ကန့် ၂၀ဖြင့်အား သွင်းနိုင် သည့် စွမ်း အင်သိုလှောင် ပစ္စည်းအား တီ ထွင်နိုင်ခဲ့သည်။ထိုစွမ်းအင် သို လှောင်ပစ္စည်းအား အယ်လ် အီးဒီ မီးသီးတစ်လုံးတည်းဖြင့်အားပေး ထားသော်လည်း ၎င်း၏စွမ်း ဆောင်ရည်မှာအလွန်မြင့်မား သည်။
ထိုတီထွင်မှုကြောင့်ပင် သူ မသည် အရီဇိုးနားပြည်နယ်၊ဖီးနစ် မြို့တွင်ကျင်းပသည့် အင်တဲလ် အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာသိပ္ပံနှင့်အင် ဂျင်နီယာပစ္စည်းပြပွဲတွင် လူငယ် သိပ္ပံပညာရှင်ဆုရရှိခဲ့သဖြင့် ဒေါ်လာ ငါးသောင်း ချီးမြှင့်ခြင်း ခံ ခဲ့ရသည်။သူမတီထွင်သည့်ပစ္စည်း မှာသေးငယ်သော်လည်းနည်းပညာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ပစ္စည်းတစ် ခုဖြစ် လာနိုင်သည်။
ခါရီတီထွင်သောပစ္စည်းမှာ မော်တော်ယာဉ်ဘက်ထရီများ၊ ဆဲလ်ဖုန်းများနှင့်အခြားမည်သည့် ပြန်လည် အား သွင်း နိုင်သော လျှပ် စစ်ဘက်ထရီအမျိုးအစားကိုမဆို အားသွင်းနိုင်သည်။ အင်ဘီစီဆန် ဖရန်စ္စကို သတင်း ဌာနကခါရီအားဤတီထွင်မှုကို ပြုလုပ်ရန်မည်သည့်အရာက တွန်းအားပေးခဲ့ကြောင်း မေးမြန်း ရာတွင် ခါရီက သူမ၏ ဆဲလ်ဖုန်း သည်အမြဲလိုလိုအားကုန်နေတတ် သဖြင့် တီထွင်ခဲ့ကြောင်းပြန် လည်ဖြေ ကြားခဲ့သည်။
သူမအသုံးသော စူပါလျှပ် သိုပစ္စည်းမှာ အခြေခံအားဖြင့် ထု ထည်ပမာဏ နည်းနည်းတွင် စွမ်း အင်များ စွာကိုသိုလှောင်ထား နိုင် မှုအပေါ်တွင်အခြေခံထားကြောင်း လည်းသူမက ရှင်းပြခဲ့သည်။
သူမ ၏ တီထွင်မှုအား သတိ ပြုမိသည့်ဂူဂယ်ကုမ္ပဏီက သူမ တီထွင်သည့် ပစ္စည်းနှင့်ပတ်သတ် ၍ သူမ အား ချဉ်းကပ်လျက်ရှိ ကြောင်းလည်း သိရသည်။
ဘူတာတွင်ရထားစောင့်နေသူ မိန်းကလေးငယ်အား သားမယားပြုကျင့်
Posted by drmyochit Sunday, May 26, 2013, under မုဒိမ်းမှု,မှုခင်း | No comments
၂၄.၅.၂၀၁၃ ရက်နေ့ နံနက် ၀၃၀၀ အချိန် မ----- (၁၅)နှစ်၊ (ဘ) ဦးတင်ဝင်း၊ မော်လမြိုင်မြို့နေသူသည် ကြည့်မြင် တိုင်ဘူတာတွင် ရန်ကုန် - ပြည် ရထားစီးရန်စောင့်နေစဉ် ထွန်းလွင်(ခ)ဆံရှည် ပါ(၅)ဦးမှ မီးရ ထား တွဲဟောင်းပေါ်ခေါ်ဆောင်၍ အလိုမတူဘဲ သားမယား အဖြစ်ပြုကျင့်ကြောင်းတိုင်တန်းသဖြင့် စမ်းချောင်းမြို့ မရဲစခန်းမှ အမှုဖွင့်အရေးယူဆောင်ရွက်ကာ ညောင်တုန်းမြို့နယ်နေ ထွန်းလွင်(ခ) ဆံရှည် (ဘ) ဦးစိန်ဝင်း၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်နေသူများ ဖြစ်သည့် ဇင်မင်းအောင် (ဘ) ဦးသန်းစိုး၊ ရန်နိုင်လင်း (ဘ)ဦးပွကြီး၊ ဇော်ထက်အောင်(ခ)၀ုကျိ(ခ)မျာက်ကြီး (ဘ) ဦးကိုထွေး တို့အား ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးလျက်ရှိပြီး ကျန်တရားခံ အောင်ခိုင်ဇော် အား ဖမ်းဆီးရမိရေးစုံစမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
Posted by drmyochit Sunday, May 26, 2013, under နည်းလမ်းများ | No comments
ဒေါက်တာဆိတ်ဖွားနှင့် ပတ်သက်၍ ခေါ်ယူ စုံစမ်းသူများ အနက် တစ်ဦးမှာ ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား သည် မိ မိဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံသွားပြီ ဖြစ်သောကြောင့် လွှတ်တော်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်မှ ဒေါက်တာ ဆိတ် ဖွား အား ဖော်ထုတ်ပြီးပါက Eleven Media Group မှ တရားစွဲဆိုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း Eleven Me- dia Group ၏ Managing Director ဒေါက်တာသိန်းမြင့်က ပြောကြားခဲ့သည်။
ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား ဆိုသူအား စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်မှ ဖော်ထုတ်တော့မည်ဖြစ်သဖြင့် အဆိုပါ ဒေါက်တာ ဆိတ်ဖွား ဆိုသူနှင့် ၎င်းနှင့်ပတ်သက်သည့် အဖွဲ့အစည်းကိုပါ တရားမကြောင်း အရ လည်းေ ကာင်း၊ရာဇာဝတ်ကြောင်းအရ လည်းကောင်း တရားစွဲဆိုသွားမည်ဖြစ်ပြီး ကော်မရှင်မှ ဖော်ထုတ် လိုက်သာ ဒေါက် တာ ဆိတ်ဖွား စစ်မှန်ခြင်း ရှိ၊ မရှိကိစ္စသည် လွှတ်တော်နှင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်၏ ဂုဏ်သိ က္ခာနှင့် သက်ဆိုင်ကြောင်း ဒေါက်တာသိန်းမြင့်က ပြောကြားခဲ့သည်။
ဒေါက်တာဆိတ်ဖွားကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင် ဖွဲ့စည်းခြင်းအပြင် ၎င်း ကိုယ်တိုင် သွားရောက်ထွက်ဆိုခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပြီး အဆိုပါကိစ္စအား လွှတ်တော်မှ အချိန်ကုန်၊ ငွေကုန်ခံကာ စုံစမ် ဖော်ထုတ်ခဲ့ရသောကြောင့် အမှန်တရားတစ်ခု ရရှိလိုကြောင်း ၎င်းက ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့သည်။
ဒေါက်တာဆိတ်ဖွားဆိုသူသည် ဇန်နဝါရီလ ၁၄ ရက်တွင် အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် Above the law ဟူသော ဆောင်း ပါးအား ရေးသားခဲ့ပြီး အဆိုပါဆောင်းပါးသည် လွှတ်တော်၏ ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိခိုက်စေသေြာေ ကာင့် ဒေါက်တာဆိတ်ဖွားအား အရေးယူပေးပါရန် ပြည်ထောင်စုကြံခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဝင် ကမာ ရွတ် မဲဆန္ဒနယ်မှ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာစိုးရင် က အဆိုတင်သွင်းထားခြင်း အား လွှတ်တော်မှ လက်ခံကာ ဇန်နဝါရီလ ၁၇ ရက်နေ့က စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး၏ ကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းရန် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်နာယက ဦးခင်အောင်မြင့်က ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်မှ ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား အားဖော်ထုတ်နိုင်ရန်အတွက် နိုင်ငံတော် သမ္မတ ရုံး ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးရဲထွဋ် အပါအဝင် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနတွင် တာဝန်ထမ်း ဆောင် ခဲ့သော ဝန်ထမ်းဟောင်းများ၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဌာနမှ ဝန်းထမ်း အ ချို့နှင့် ဂျာနယ်လစ်များ၊ ဘလော့ဂါအချို့အား ခေါ်ယူမေးမြန်းခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်။
ဒေါက်တာဆိတ်ဖွားနှင့် ပတ်သက်၍ ခေါ်ယူစုံစမ်းသူများအနက် တစ်ဦးမှာ ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား ဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံ ခဲ့ပြီ ဖြစ်သောကြောင့် မကြာမီတွင် မည်သူသည် ဒေါက်တာဆိတ်ဖွားဖြစ်သည်ကို လွှတ်တ်ာမှ ထုတ်ြ ပန်ေ ပး သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင် ဦးလှဆွေက မေ လ ၂၀ ရက်နေ့တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
Posted From Yangon Chronicle
တရုတ် လိင်အလုပ်သမ များ အနှိပ်စက်ခံနေရသည်ဟု Human Rights မှ ဆို
Posted by drmyochit Sunday, May 26, 2013, under နိုင်ငံတကာသတင်းများ | No comments
တရုတ်နိုင်ငံမှ လိင်အလုပ်သမများဟာ အာဏာပိုင်တွေရဲ့ အနိုင်အထက်ပြု နှိပ်စက်မှုတွေကို ခံနေရ သည်ဟု Human rights Watch က မေလ ၁၄ ရက်နေ့မှာ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
လိင်အလုပ်သမ များဟာ ဘာလူ့အခွင့်အရေးမှ မရှိသကဲ့သို့ ဆက်ဆံခံနေရပါတယ်လို့ နိုင်ငံတကာ စောင့် ကြည့် ခွေး များ အဖွဲ့ရဲ့ တရုတ်နိုင်ငံ ဒါရိုက်တာ Sophie Richardso မှ ဟောင်ကောင်တွင် ပြုလုပ်ေ သာ အစည်း အဝေးမှာ ပြောခဲ့ပါတယ်။ ရဲများက ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ပေး၇မယ့် အစား လိင်အလုပ်သမ များ အား ထိန်းသိမ်းစခန်းများမှ ရိုက်နှက်ခံရခြင်း၊ နှိပ်စက်ခြင်းတွေကို ပုံမှန် ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့လည်း သူက ပြောပါတယ်။
Xiao Yue လို့ အမည်ရတဲ့ အမျိုးသမီးကတော့ လိင်အလုပ် လုပ်တယ်ဆိုတာ မ၀န်ခံတဲ့ အတွက် သူမဟာ မျက် လုံးတွေ ပြာဝေလာသည်အထိ ရိုက်နှက်ခံခဲ့ရပါတယ်လို့လို့ သူမရဲ့ အစီရင်ခံစာမှာ ဖော်ပြထားပါ တယ်။ အခြား တစ်ယောက်ကတော့ သူမနဲ့ အခြား အဖော် ၂ ယောက်ဟာ သစ်ပင်မှာ အချည်ခံရပြီး၊ ရေအေးတွေနဲ့ ပက်တာ၊ ရိုက်နှက် တာ တွေကို ခံခဲ့ရတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
တရုတ်နိုင်ငံမှ ထိုအမျိုးသမီးအားလုံးကတော့ မြန်မာနိုင်ငံက ဟိုအမတ်မကြီးလို လူမျိုးတွေကို အရမ်းမျှော် လင့်နေကြပါပြီ။
HONG KONG (AFP) - Chinese sex workers are being subjected to widespread abuse by authorities, including beatings and torture in police custody and detention without trial, Human Rights Watch said on Tuesday, May 14.
ဒီဖြစ်စဉ်မဖြစ်ခင် မေလ ၁၅ရက်နေ့မှာ ရဲတစ်ဦးကို စိတ်မနှံ့တဲ့ မွတ်စလင်တစ်ဦးက တောခုတ်ဓါးနဲ့ သတ် ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်၊ ရဲက သေနတ်နဲ့ ပစ်ခတ်ခုခံခဲ့တဲ့အတွက် သတ်ဖို့ကြိုးစားသူ သေဆုံးခဲ့ ပါ တယ်၊ ဒါကို မကြေနပ်တဲ့ မွတ်စလင် အများစုဟာ အခုလို ဖျက်ဆီးနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါ်လာဘီလီယံခန့် ပျက်ဆီးဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဆွီဒင်ရဲတပ်ဖွဲ့ကတော့ ထိန်းသိမ်းဖို့ ကြိုးစား ဆဲပဲဖြစ် ပါတယ်။
ဆွီဒင်နိုင်ငံကို အခြားနိုင်ငံများမှ ကူပြောင်းနေထိုင်လာသူများ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆွီဒင်မှာ မွတ်စလင်ဦးရေ တစ်သန်းခန့် ၀င်ရောက်နေထိုင်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန် တပ်မတော်ဟာ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရာဇ၀တ်မှုတွေ များပြားလာတဲ့ ဆိုးရွားသည့် အခြေအနေကို ရင် ဆိုင်နေရကြောင်း အမေရိကန် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Chuck Hagel မှ ယနေ့(၂၅ -၅-၂၀၁၃)မှာ ပြု လုပ် တဲ့ ၀က်စပွိုင့်မှာ ရှိသည့် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ တက္ကသိုလ်၏ ဘွဲ့ယူ အခမ်းအနားမှာ ပြောကြား လိုက် ပါ သည်။ အဆိုပါ ၀က်စပွိုင့်၊ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ တက္ကသိုလ်တွင် အမေရိကန် တပ်ကြပ်ကြီး တစ်ဦးဖြစ်သူ Michael McClendon ဟာ အမျိုးသမီး ဗိုလ်လောင်းများ၏ ရေ ချိုးခန်း ဗီဒီယို များ ရိုက်ကူးမှုကြောင့် ပုဒ်မ ၄ ခုဖြင့် တရားရင်ဆိုင် ရလျှက် ရှိကြောင်း ယနေ့ ရိုက်တာ သတင်းတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
Chuck Hagel မှ အမေရိကန် စစ်တပ်အတွင်းက လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရာဇ၀တ်မှုတွေဟာ စစ်တပ်က အလေး ထား လိုက်နာရတဲ့ ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်း တွေကို တဖြည်းဖြည်း ထိခိုက်လာကြောင်း ၊ အဆိုပါ ကိစ္စများကို ရပ် တန်းက ရပ်နိုင်အောင် ကြိုး စားရမည် ဟု ဖြစ်ကြောင်း ပြောခဲ့သည်ဟု သတင်းတွင် ပါဝင်ပါသည်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရာဇ၀တ်မှုများ ဖြစ်နေခြင်းအတွက် အမေရိကန် သမ္မတ အိုဘားမားမှလည်း အမေရိကန် ရေ တပ် အကယ်ဒမီ တစ်ခု၏ ဘွဲ့နှင်းသဘင် အခမ်းအနား တွင် ပြောပြီး ရက် အနည်းငယ်အတွင်း ကာ ကွယ် ရေး ၀န်ကြီးမှလည်း ပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ပင်တဂွန် စစ်ဌာနချုပ် အနေဖြင့်လည်း အဆိုပါ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရာဇ၀တ်မှုများကို အကြိမ်ကြိမ် ဖြေရှင်း နေ ရပြီး အမေရိကန် စစ်တပ်၏ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရာဇ၀တ်မှုများဟာ ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် ၁၉၀၀၀ မှု ရှိခဲ့ရာမှ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ၂၆၀၀၀ အထိ တိုးမြှင့်လာသည့် အတွက် ၃၇ % ပိုမို များပြား လာ ကြောင်း အဆိုပါ သတင်း က ဆိုပါသည်။
Defence Secretary Chuck Hagel called sexual assaulta"scourge" on Saturday as he addressed graduates of the US Military Academy at West Point, whereasergeant stands accused of videotaping female cadets in the showers.
His comments cameaday after President Barack Obama deliveredasimilar message to graduates at the US Naval Academy, saying sexual assault threatened to erode trust and discipline in America's armed forces.
A study released by the Defence Department two weeks ago estimated that reports of unwanted sexual contact in the military, from groping to rape, rose 37 per cent in 2012, to about 26,000 cases from 19,000 the previous year.
The incidents have embarrassed the US military and prompted members of Congress to introduce legislation designed to toughen up the Pentagon's handling of sex crimes.
"You will need to not just deal with these debilitating, insidious
မန်းရွှေမြို့တော် ခရီးသည်တင်ယာဉ် နေပြည်တော် အမြန်လမ်းမကြီးတွင် တိမ်းမှောက်ပြီး ၁၁ ဦးသေ၊ ၁၃ ဦး ဒဏ်ရာရရှိ
ကိုးဂွတံတားအောက်သို့ ထိုးကျပျက်စီးနေသော မန်းရွှေမြို့တော် ခရီးသည်တင်ယာဉ်အား မေ ၂၅ ရက် နံနက်ပိုင်းက တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ - ဇော်ဝင်းချစ်)
မေ ၂၅ ရက် နံနက် ၆ နာရီ ၂၀ မိနစ်ခန့်တွင် ရန်ကုန်-မန္တလေး-ပြင်ဦးလွင်-မော်လမြိုင်-ဘားအံ-သံဖြူ ဇရပ်သို့ မောင်းနှင်သော မန်းရွှေမြို့တော် ခရီးသည်တင် မှန်လုံယာဉ် တစ်စီးသည် ပြည်ထောင်စု အမြန် လမ်းမ ကြီးပေါ်တွင် တိမ်းမှောက်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ကိုးဂွတံတားအောက်သို့ ထိုးကျခဲ့သဖြင့် ခရီးသည် ၁၁ ဦး သေဆုံး ခဲ့ပြီး ၁၃ ဦး ဒဏ်ရာရရှိသွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မန်းရွှေမြို့တော် ခရီးသည်တင် မှန်လုံယာဉ်သည် ရန်ကုန်မှ မေ ၂၄ ရက် ည ၈ နာရီခွဲမှ စတင်ကာ မန္တလေး သို့ ထွက်ခွာလာစဉ် ယာဉ်မောင်းသီဟအောင် မောင်းနှင်ချိန်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အုတ် တွင်းမြို့ နယ် ပြည်ထောင်စု အမြန်လမ်းမကြီး မိုင်တိုင်အမှတ် ၁၂၅ မိုင် ၃ ဖာလုံနှင့် ၄ ဖာလုံ အကြားသို့အ ရောက် တွင် ကိုးဂွတံတားအနီး လမ်းမဘယ်ဘက် နံဘေးရှိ ဘာဂျာတုံးအား တိုက်မိရာမှ ကိုးဂွတံတားအား ဆက် လက် တိုက်မိကာ တံတားအောက်သို့ ထိုးကျတိမ်းမှောက်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ယာဉ်ပေါ် တွင် ယာဉ်မောင်းယာဉ်နောက်လိုက်နှင့် ခရီးသည် စုစုပေါင်း၂၆ ဦး လိုက်ပါခဲ့ပြီး အမေရိ ကန်နိုင်ငံသား ခရီးသွား တစ်ဦးလည်း ပါဝင်ခဲ့ရာ အမေရိကန်နိုင်ငံသား Gleen အသက် ၃၁ နှစ်ခန့်အား ဆောက်လုပ်ရေး ၀န်ကြီးဌာနမှ ရန်ကုန်သို့ ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပြီး တစ်ဦးမှာ မိမိအစီအစဉ်ဖြင့် ပြန်လည် ထွက်ခွာ သွားကြောင်း သိရသည်။
လမ်းမှာထမင်းစားနားတဲ့ အချိန်မှာ သူတို့ကားကို ပြင်နေတာ တွေ့တယ်။ ဦးဇင်းလည်း ကားပေါ်တက်ခါနီး ကားဘီးကို ကြည့်လိုက်တော့ ကားဘီးက ကွဲနေတာတွေ့တယ်။ တာယာကကွဲနေတာ အခုမှောက် တဲ့နေရာရောက်တော့ ကားကဘီးပေါက်တာလား ဘာလားမသိဘူး၊ ဟိုဘက်ယိမ်း ဒီဘက်ယိမ်း ဖြစ်ပြီးတော့မှ ချောက် ထဲကို ထိုးကျသွားတာ . . . . .
မှန်လုံယာဉ်မှာ ခါးပိုင်းကျိုး အနေအထားဖြင့် တံတားပေါင်မှ အောက်ဘက်သို့ ထိုးကျတိမ်းမှောက်ရာ ကားတစ် စီးလုံး ပျက်စီးသွားခဲ့ပြီး ခရီးသည် ကျား ၅ ဦး၊ မ ၅ ဦးနှင့် သံဃာ ၁ ဦး စုစုပေါင်း ၁၁ ဦး သေဆုံး သွား ခဲ့ကြောင်း မေလ ၂၅ ရက် မွန်းလွဲ ၂ နာရီ ၄၀ မိနစ်စာရင်းအရ သိရှိရသည်။ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိသူများ အား ဖြူးမြို့နယ် ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတွင် အတွင်းလူနာအဖြစ် ကျား ၉ ဦး၊ မ ၄ ဦး၊ စုစုပေါင်း ၁၃ ဦး တက်ရောက် ကုသနေပြီး ကျား ၂ ဦးမှာ စိုးရိမ်ရသော အခြေအနေရှိနေပြီး သတိပြန်လည်လာခြင်း မရှိသေးကြောင်း၊ ဖြူးမြို့ဆေးရုံကြီးရှိ အတွင်းလူနာများအား နိုင်ငံတော်မှ ထုတ်ပေးထားသော အရေးပေါ် အထူး ကုဆေး ၀ါးများ၊ ဓာတ်မှန်ရိုက်ပေးခြင်းတို့အား ဆေးရုံရှိ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီးများဖြင့် အခမဲ့ ကုသပေး လျက်ရှိကြောင်း ဖြူးမြို့နယ် ပြည်သူ့ဆေးရုံအုပ် ဒေါက်တာဦးဇော်လွင်က ပြောကြားသည်။
ဒဏ်ရာရ ခရီးသည်များအား ဖြူးဆေးရုံတွင် တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ - ဇော်ဝင်းချစ်)
"ဦးဇင်းက မြစ်ကြီးနားကိုပြန်ဖို့ ရန်ကုန်ကနေ မန္တလေးကို စီးလာတာပါ။ ကားက ရန်ကုန်ကနေ ည ၈ နာရီခွဲမှာ စထွက်တာ၊ စထွက်ပြီး သိပ်မကြာဘူး အမှတ် ၃ လမ်းမကြီးကို မရောက်ခင်ကတည်းက နှစ်ကြိမ်လောက် ပျက်သေးတယ်။ အဲဒီက ဆက်မောင်းလာပြီး လမ်းမှာထမင်းစားနားတဲ့ အချိန်မှာ သူတို့ကားကို ပြင်နေတာ တွေ့တယ်။ ဦးဇင်းလည်း ကားပေါ်တက်ခါနီး ကားဘီးကို ကြည့်လိုက်တော့ ကားဘီးက ကွဲနေတာတွေ့တယ်။ တာယာကကွဲနေတာ အခုမှောက်တဲ့နေရာရောက်တော့ ကားကဘီးပေါက်တာလား ဘာလားမသိဘူး၊ ဟိုဘက်ယိမ်း ဒီဘက်ယိမ်း ဖြစ်ပြီးတော့မှ ချောက်ထဲကို ထိုးကျသွားတာ။ နောက်တော့ ဦးဇင်းတို့လည်း ဘာမှမသိတော့ဘူး" ဟု ဖြူးမြို့ဆေးရုံကြီးတွင် အတွင်းလူနာအဖြစ် ဆေးကုသမှု ခံယူနေသော မြစ်ကြီးနားမြို့၊ မဟာဗောဓိကျောင်းတိုက်မှ ဦးဇင်းဦးဇန္နကမှ မိန့်ကြားတော်မူသည်။
"ကျွန်မတို့ကဖြစ်ပြီး ၁၀ မိနစ် ပတ်ဝန်းကျင်လောက်မှာ ရောက်တယ်။ အရေးကြီးတဲ့သူတွေ အရင်ပို့တယ်။ ၁၀ မိနစ်လောက်သာ နောက်ကျမယ်ဆိုရင် နောက်ထပ် ၃၊ ၄ ယောက်လောက် ထပ်ပြီးသေမှာပါ။ ရောက်ရောက်ချင်း နှလုံးခုန်ရပ်နေတဲ့ မိန်းကလေးကို နှလုံးခုန်အောင် လုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် အသက်ဆုံးရှုံးမှုကနေ လွတ်မြောက်အောင် ကူညီနိုင်ခဲ့တယ်။ ယခုလို ကားမှောက်ရတာ အဓိကကတော့ ကားဘီးတွေက ပွိုင့်တွေမကောင်းတာလည်း ပါတယ်" ဟု အရေးပေါ် ကယ်ဆယ်ရေးစခန်း တာဝန်ခံ ဒေါ်သန်းသန်းမြင့်က ပြောကြားခဲ့သည်။
"ဖြစ်တဲ့နေရာကို ကျွန်တော်တို့ ၁၀ မိနစ်အတွင်း ရောက်ရှိသွားတယ်။ ဒီတစ်ခေါက် ဖြစ်စဉ်မှာ အမြန်လမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ အင်အားသုံးပြီးတော့ လုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အတွက် အသက်တွေကို ကယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သေဆုံးဒဏ်ရာရရှိတဲ့ သူတွေရဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ဆောက်လုပ်ရေး၊ ရဲတပ်ဖွဲ့၊ အုပ်ချုပ်ရေး၊ ပြည်သူလူထု ပါဝင်တဲ့ ဘုတ်အဖွဲ့ဖွဲ့ပြီး သိမ်းဆည်းထားပါတယ်။ အမြန်လမ်းပေါ်မှာ တာယာပေါက်ပြီးတော့ ယာဉ်တိမ်းမှောက်ဖြစ်စဉ်တွေက ၈၀ ရာခိုင်နှုန်း ရှိပါတယ်။ အဲဒီအတွက် ယာဉ်ကြံ့ခိုင်မှုကို စစ်ဆေးဖို့ လိုပါတယ်" ဟု အမြန်လမ်း ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ရဲမှူးကြီးနေ၀င်းက ဆိုခဲ့သည်။
မန်းရွှေမြို့တော် မှန်လုံယာဉ်သည် ရန်ကုန်မှ စထွက်ပြီး ကားခဏခဏ ပျက်ခြင်း ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း၊ အဆိုပါယာဉ်အား ယာဉ်မောင်းသီဟအောင်နှင့် ညွန့်ဝေနှစ်ဦး မောင်းနှင်ပြီး ရန်ကုန်မှစထွက်ချိန်တွင် ယာဉ်မောင်း ညွန့်ဝေမှ မောင်းနှင်ပြီး ဖြူးမြို့နယ် ယာဉ်ရပ်နားစခန်းတွင် ထမင်းစားနားပြီး ဆက်လက်ထွက်ခွာရာ ယာဉ်မောင်းသီဟအောင်က ပြောင်းလဲမောင်းနှင်ရာတွင် ယာဉ်တိမ်းမှောက်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဒဏ်ရာများ ရရှိကာ ဖြူးမြို့ပြည်သူ့ဆေးရုံးကြီးတွင် အတွင်းလူနာအဖြစ် ဆေးကုသမှု ခံယူကြသူ ခရီးသည်များက ပြောကြားသည်။
အဆိုပါ ယာဉ်တိုက်မှု ဖြစ်ပွားရာသို့ အမြန်လမ်း ရဲစခန်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးစခန်း၊ ဆောက်လုပ်ရေးဌာနနှင့် ခရိုင်အတွင်းရှိ နယ်မြေခံ ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့် မီးသတ်တပ်ဖွဲ့မှ အင်အားများဖြင့် လာရောက်ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြပြီး ဗောဓိကုန်း အမြန်လမ်း ရဲစခန်းမှဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး ယာဉ်မောင်းအား ယာဉ် ပ-၅/၂၀၁၃ ပြစ်မှုပုဒ်မ ၃၀၄( က)/၃၃၈/၃၃၇ ဖြင့် အရေးယူ ဆောင်ရွက်နေကြောင်း သိရှိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ထုတ်ပြန်သည့် ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်းမပေါ်ရှိ ယာဉ်မတော်တဆ ဖြစ်ပွားမှု စာရင်း
ယာဉ်မတော်တဆမှု ဒဏ်ရာရ သေဆုံး
၂၀၀၉ မတ်လမှ ၂၀၁၀ မတ်လအတွင်း ၁၀၃ ကြိမ် ၁၇၀ ဦး ၄၇ ဦး
၂၀၁၀ ဧပြီလမှ ၂၀၁၁ မတ်လအတွင်း ၇၃ ကြိမ် ၁၄၅ ဦး ၃၈ ဦး
၂၀၁၁ ဧပြီလမှ ၂၀၁၂ ဒီဇင်ဘာလအတွင်း ၁၂၂ ကြိမ် ၁၅၁ ဦး ၁၀၁ ဦး
Nan Thu Zar ရဲ့ အမိုက်စား ဓါတ်ပုံ Album
Posted by drmyochit Sunday, May 26, 2013, under ဓါတ်ပုံ Album | No comments
ကျောင်းသားတစ်ယောက်သည် အတန်းရှေ့သို့ ထွက်လာပြီး တောင်းပန်စကားပြောကာ မိမိကိုယ်မိမိ သေနတ် ဖြင့် ပစ်သတ် သွားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု မြောက်ပိုင်း ဒါကိုတာရှိ စာသင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းတွင် ကျောင်းသား တစ်ဦး သည် အတန်းရှေ့ထွက်လာကာ သေနတ်ဖြင့် ပစ်သေသွားသည့်ဖြစ်ရပ်တစ်ခု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ရစ်ခ်ျလန်းကောင် တီ အာဏာပိုင်များက ပြောကြားခဲ့သည်။
သေနတ်ဒဏ်ရာရထားသည့် ထိုကျောင်းသားကို ဆေးရုံသို့ခေါ်သွားကြောင်း ဖဲယားမောင့် အစိုးရကျောင်းမှ ကျောင်း အုပ်ကြီး ဂျေး တောင်ဆင်းကပြောကြားခဲ့သည်။
ထိုကျောင်းတွင် ကျောင်းသား ၁၁၂ ဦးရှိပြီး သူငယ်တန်းမှ ၁၂ တန်းအထိ သင်ကြားပေးနေသော ကျောင်း တစ် ကျောင်းဖြစ်သည်။ ထိုကျောင်းသားသည် အဘယ်ကြောင့်တောင်းပန်စကားဆိုရကြောင်းနှင့် ထို သို့သေ နတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်သွားရကြောင်းမသိပါဟု ရဲမှူး လာရီ လက်ရ်ှဟို့စကီကဆိုသည်။ အတန်းဖော် များက ပြောကြား ရာတွင် ပြဿနာအထွေအထူးမရှိကြောင်း သိရသည်။
ထိုမြို့တွင် ယခုကဲ့သို့ အဖြစ်အပျက်များဖြစ်ပွားမှုမရှိသည့်အပြင် သူနေထိုင်သည့် အသင်းတိုက်မှာလည်း ဘာသာရေး အလွန် ကိုင်းရှိုင်း သူများဖြစ်သည်။ အသင်းတိုက်မှလူများသည် သူ့ကိုချစ်ခင်ကြပြီး ဆုတောင်းပေး နေကြသည်။
ကျောင်းမှဆရာများက ကျောင်းသားကို ရှေးဦးပြုစုနည်းဖြင့် ပြုစုကုသပေးကြပြီး ကျောင်းကို ခေတ္တ ပိတ်ထား ခဲ့ ကြသည်။ ကျောင်းသားကို ဆေးရုံသို့ပို့လိုက်သော်လည်း သေသည်ရှင်သည် မသိရသေးပေ။
မုဒိမ်းအကျင့်ခံရပြီး ကိုယ်ဝန် ရှိလာသည့် မိန်းကလေး တစ်ဦးသည် ကျောင်းအိမ်သာ အတွင်း ကလေးမွေး ခဲ့သည့် ဖြစ်ရပ်တစ်ခု ထိုင်ဝမ်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
အသက် ၁၇ နှစ်အရွယ် ကျောင်းသူလေးကို လမ်းပေါ်တွင်နေထိုင်သည့် အခြေအနေမဲ့တစ်ဦးက မုဒိမ်း ကျင့်ပြီး ကိုယ်ဝန် ရရှိလာခဲ့ကြောင်း ထိုမိန်းကလေးက ဝန်ခံခဲ့သည်။
မိန်းကလေးသည် မိမိတွင် ကိုယ်ဝန်ရှိနေသည်ကို မသိဘဲ အဖော်များနှင့် ဘတ်စ်ကက်ဘော ကစားနေစဉ် ဗိုက်နာ လာသဖြင့် အိမ်သာသို့ပြေး ခဲ့ရကြောင်း၊ အိမ်သာ ထဲရောက်မှ ကလေး ထွက်ကျ လာသဖြင့် အံ့သြ သွားမိ ကြောင်း၊ အရေးပေါ်အော်ဟစ် အကူ အညီတောင်းပြီး ဆေးရုံသို့ အမြန်ပို့ခဲ့ရကြောင်း၊ ကလေးသည် မွေးမွေးချင်း လုံးဝ အသက်မရှူကြောင်း တာဝန်ရှိသူများကပြောကြားခဲ့သည်။
သူမ၏ မိဘများ၊ သူငယ်ချင်းများနှင့် မိန်းကလေးကိုယ်တိုင် ကိုယ်ဝန်ရှိနေခြင်းကို မသိခဲ့ဘဲ၊ ဝလာသည်ဟု ထင် ခဲ့ကြောင်း သူမကဆိုသည်။
သူမကို တာဝန်ရှိသူများက မည်သူဆိုခြင်းကို စစ်မေးရာတွင် မပြောနိုင်ကြောင်း၊ ရဲများကလည်း ပတ်ဝန်း ကျင်ရှိ အခြေအနေမဲ့များ၏ DNA နှင့် တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးရန် စီစဉ်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
မွေးဖွားလာသည့်ကလေးမှာ မိန်းကလေးဖြစ်ပြီး အသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်း၊ မိသားစုက ထိုကလေးကို မိဘမဲ့ ကလေး များဂေဟာသို့ သွားရောက်ပေးပို့ရန် စီစဉ်ထားသည်ဟုဆိုသည်။
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ နည်းပညာတက္ကသိုလ် ကျောင်းသူ သေဆုံးမှု C...
ဘူတာတွင်ရထားစောင့်နေသူ မိန်းကလေးငယ်အား သားမယားပြုက...
Eleven Media Group က ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား ကို တရားစွဲမည...
တရုတ် လိင်အလုပ်သမ များ အနှိပ်စက်ခံနေရသည်ဟု Human R...
၅ ညတာဖြစ်ပွားနေတဲ့ ဆွီဒင်နိုင်ငံတွင် အကြမ်းဖက်ခဲ့သ...
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရာဇ၀တ်မှု များပြားလာခြင်းကို ရင်ဆ...
မန်းရွှေမြို့တော် ခရီးသည်တင်ယာဉ် နေပြည်တော် အမြန်လမ...
စာသင်ခန်းရှေ့ထွက်လာပြီး တောင်းပန်ကာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို...
မုဒိမ်းအကျင့်ခံရသည့်မိန်းကလေး ကျောင်းအိမ်သာထဲတွင် ...